Zuva: Chivabvu 1, 2020
Sechikamu chematanho anotorwa nekuda kweCovid-19 denda, nguva dzekudzoka dzichashandiswa mumaguta makumi matatu nematanho eZonguldak nhasi uye pakupera kwevhiki. Kuitira kuti ive nechokwadi chekuti vashandi vehutano pa IMM havana kana chinonetsa pakuenda kubasa [More ...]
Vashanu Bhirionu Vanhu Vanogona Kutora Kusvika Makore maviri Asingazopera Pasina Corona
Vashanu Bhirionu Vanhu Vanogona Kutora Kusvika Makore maviri Asingazopera Pasina Corona; Nyanzvi dzati chirwere covid-19 chingangoita makore maviri, uye zvikamu zviviri muzvitatu zvevanhu vepasi hazvisi kuzopera pasina kuwana hutachiona. [More ...]
Coronavirus Alarm mumauto eRussia
Zvinoenderana neshoko rakaitwa neveRussia Mauto Echisimba, huwandu hwemauto anga achibatsira kuongororwa kweCOVID-19 asvika 901 kusvika parizvino. Mune chirevo, 19 ve324 mauto aive akanaka kuCCIDID-176 akaiswa muchipatara pasi peS Ministry of Defense yeRussia. [More ...]
Autonomous Isina Kurongwa KBRN Reconnaissance Vehicle kubva ku HAVELSAN
pakukura Michina kambani Turkey raMwari riri rimwe HAVELSAN chinzvimbo, anoramba basa kuumba nyika uye nemakanzuru michina pamusoro CBRN vanotyisidzirwa. Turkey yokutanga Chemical, Biological, Radiological uye Nuclear (CBRN) Defense [More ...]
Rinofara Zuva reVashandi, Chivabvu 1, Zuva rechitima neSolidarity
Kutarisira kudzoka kumazuva ano isu tinotadza; ndivo magamba chaiye kuchiteshi vashandi achitora masikati nousiku Turkey! Tinoda kutenda vashandi vedu vezvitima avo vakasimbisa simba redu kwemakore gumi nematanhatu, uye nevashandi vedu vese [More ...]
Baku Tbilisi Kars Railway Inofanirwa Kushandiswa Zvakanyanya
Turkish Council of Transport Minisitiri Pamusangano weVhidhiyo, Baku-Tbilisi-Kars Railway Yatsikiswa Kuti Multimodal Transport Corridor Inofanirwa Kuve Nekuita Zvakawanda, Kutanga Kubva kuTashkent Kuti Iveanyanya, Gurukota rezvekutakura Nzvimbo. [More ...]
Kudzoreredzwa kweKırklareli Nhoroondo Yekuvaka Chivakwa Inotanga
Kudzorera ithenda yechiitiko chedzimba yezvivakwa, iyo yakapihwa naGavhuna weKırklareli Osman Bilgin, iyo yakaziviswa setsika uye kofi mumwedzi yakapfuura, yakaitwa. Gavhuna Bilgin anga agara kwemakore kweakavakirwa nhoroondo chiteshi kuvaka munharaunda yedhorobha. [More ...]
Başakşehir Kayaşehir Metro Line ichaitwa neiyo Ministry!
Ministry of Transport and Infitution ichaita kuvakwa kweBaşakşehir-Kayaşehir metro mutsara munzira yeIstanbul Başakşehir City Hospital, inova yekutanga muEurope nechikamu chekuva nemabatiro evarwere akanyanya ekutarisira. Rail Yeguta [More ...]
MuNorway At A Level Kuyambuka, Chitima Chinotakura Turori-Kutakura Rori
Rori yakatakura igwa pachirevheta muguta reSkien, kuNorway, yakanga yakaiswa muchikamu chekuyambuka nekuda kwechikonzero chisingazivikanwe. Midziyo yekuchengetedza yezinga rekuyambuka yakavharwa paTIR, iyo yaisakwanisa kubuda mujamu, uyezve zvese [More ...]
Mask Inotumirwa kuTransmen Inopa Ruzhinji Yekutakura Service muVan
Van Metropolitan Municipality vakabvisa motokari dzayo nekuparadzira masks kumatekisi ematangi uye kune vezvimabhizimusi vezvitima zvevanhu vese zvavo vanoita zvekutakura vanhu mukati meguta mukati mematanho ematanho eiyo coronavirus. Denda re coronavirus, iro rinobata nyika yese [More ...]
Mask ine Shield yakagoverwa kune maTransmen muOrdu
Ordu Metropolitan Municipality, inoita mabasa ayo zvine hunyanzvi mudunhu rese nekuda kwedenda, inochengetedza nzira dzayo dzekuchengetedza padanho repamusoro munzvimbo dzese. Mune mamiriro ezvinhu aya, Metropolitan Municipality inoshandisawo mota dzekutakura vanhu dzinoshandiswa nevakawanda. [More ...]
Atatürk Urban Sango Kuziviswa kubva kuImamoglu ..!
Istanbul Metropolitan Meya Ekrem İmamoğlu vakaita bvunzo muHacıosman Grove, zita rake rakashandurwa se "Atatürk City Sango" mushure megadziriro dzakaitwa. Vachitaura kuti paki iyi inoshamisa nzvimbo, İmamoğlu akati, "Iri pedyo nekufambisa kwemamita. [More ...]
Karaismailoğlu, uyo akaongorora nzvimbo yekuvaka mudunhu reAyazı padunhu rechitanhatu kuNorth Marmara Motorway, akati kune vatori venhau kuti urefu hwakareba hwematanho matanhatu-mazana mana emakiromita. Minister Karaismailoğlu, 6 [More ...]
Imunda wemizambiringa chivakwa chaipo paAlsancak Station, chimwe chezvakakosha tsika dze herzmir, iri kuimba yemuseum nhasi. Izmir TCDD Museum uye Art Gallery, kwauchasangana nezvapupu chaizvo zve nhoroondo, ndiko kuyeuka njanji muAnatolia [More ...]
İzmir Çamlık Steam Traum Museum
Çamlık Steam Locomotive Museum kana Çamlık Railway Museum ndeye yakavhurika mhepo njanji museum inowanikwa mu Çamlık nharaunda munharaunda yeSelçuk mudunhu reIzmir. chikuru chacho chikuru njanji Museum uye miziyamu kuunganidza muEurope muna Turkey [More ...]
Migwagwa uye Boulevards Gadzirira Chirimo muEskisehir
Kuenderera mberi kuvaka, kugadzira nekugadzirisa mabasa mukati meguta uye mumaruwa nekudziya kwemamiriro ekunze, Eskişehir Metropolitan Municipality, apo kugadzirisa magwagwa akakuvadzwa munguva yechando mumaruwa, usabuda mukati meguta. [More ...]
Hutano Package Inogoverwa muTraffic Mwenje muMersin
Mersin Metropolitan Municipality inoenderera kugovera huturu hwehutano kune vagari panguva yekubuda kwe coronavirus. Mapakeji ehutano akagadzirirwa mukati mekukwirira kweguta metropolitan haashandiswe kune vanopfuura mumotokari mukati mevhiki kana nguva yekudzoka isingaisirwe. [More ...]
Saudi Arabia Kugadzira Turkish Pfuti Kubva 2021
Mukutaura kwakaitwa kubva ku-account yeTwitter yeGeneral Directorate yeMasoja Indasitiri yeHumambo hweSaudi Arabia (GAMI), zvakataurwa kuti zvidzidzo zvekuvandudza uye kugadzira emafambisheni en ndege zvisina kurongwa akatanga. Mune chirevo chakaitwa, iyo kalendari yeprojekiti [More ...]
Nharaunda Yekuyevera Yekuzivisa Label yeAkçaray Tramways uye Mabhasi
TransportationPark, inobatsira weKocaeli Metropolitan Municipality, yaita zvemitambo yekuzivisa nyevero mumabhazi ese nematangi. Nekushandisa uku, inoitirwa kuti vafambi vafambe zvine hutano hwekufambisa vane hushoma huwandu mumabhazi nemadhamu. ALL [More ...]
Eurasia Airshow 2020 Fair Yakatumirwa kuna Zvita
Turkey kwakaita avhiyesheni inoratidzirwa yokutanga inobva ndege inoratidza Eurasia Airshow 2020 ichaitwa muna Antalya International Airport musi 2-6 December 2020 zuva. Ruremekedzo, urwo rwanga rwarongwa kuti ruitwe muna Kubvumbi, rwaifanirwa kumiswa nekuda kwedanho redenda. zvakanaka [More ...]
Ndege Inotumira Medical Aid kuenda kuUSA Yakadzoka kuA Ankara
Mune chirevo chakaitwa nebazi rezvekudzivirirwa kwenyika, yakayeuchidzwa kuti ndege iyi, iyo yaive yakagadzirirwa pamwe nekurairwa kweMutungamiri Recep Tayyip Erdoğan, iyo yakatora boka rekutanga rezvoutano zvekushandisa kuti rishandiswe mukurwisa denda re 'Covid-19', rakabviswa ku Ankara nenguva dza2 mangwanani. [More ...]
Vashumiri murume, WHO Kutsanangurwa Turkey Kukunda ari Covidien-19
World Health Organisation (WHO) General Director. Pamusangano weeruzivo, wakasarudzwa naTedros Ghebreyesus, Gurukota rezvehutano Dr. Fahrettin Koca, akaudza Turkey pamakakatanwa pamwe Covidien-19. Yakabatwa nemusangano wevhidhiyo uye pasi rese [More ...]
Inobudirira Kubatanidza Coronavirus kuVashandi
Iro Ministry of Family, Labor and Social Services inoenderera mberi nekuedza kwayo kuve nehupenyu hwakachengeteka uye hwakachengeteka hwekushanda muCCID-19 maitiro. Bazi ngozi chinogona kuoneka yokutanga nguva yatanga muTurkey, pashure pamusoro indasitiri kuva [More ...]
3 zuva kurambidzwa asati apinda munzira, rezvemukati, General Directorate of Security, Gendarmerie General Raira Coast Guard Command zvikwata munyika pamwe kutora chikamu 15: 00-24: 00 pakati maawa mawa Turkey Peace Trust [More ...]
Keltepe Ski Center Inogadzirira Mwaka Wechirimo
Gavhuna weKarabük Fuat Gürel akaongorora magadzirirwo akaitwa dzimba nekuvandudza nzira dzakatangwa neveProvince Special Administration timu munzira inoenda Keltepe Ski Center ndokuwana ruzivo kubva kune zviremera. Kuti ishandiswe muzvivakwa uye mukuwedzera nzira dzemigwagwa [More ...]